Isigcini se-Gold Horn esivela kuPierre Loti Hill Sithinta Wonke Umuntu | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulUkubukwa kwe-Gold Horn kusuka kuPierre Loti Hill Kujabulisa wonke umuntu
13 / 05 / 2020 34 Istanbul, JIKELELE, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, TURKEY, TELPHER
Ukubukwa kweHalic kusuka ePerre Hill kudume kuwo wonke umuntu
Lapho ufika kula ma-ridges, okuyisifunda esihle kakhulu lapho ungabuka khona lelo panorama elidumile le-Gold Horn; Kutholakala uCofi, oqanjwe ngumbhali odumile waseFrance uPierre Loti. Igama langempela likaPierre Loti, ohlala e-Istanbul isikhathi eside futhi ongumthandi weqiniso we-Istanbul, “nguJulien Viaud”. I-Historical Coffee iyindawo ekahle lapho ukubuka okungafaniyo kungabonakala khona. Kungenzeka futhi ukukhuphuka egqumeni ngemoto ikhebula.
mayelana ne-pier loti hill
Kuthiwa uPierre Loti, owabona njengezwe lesibili, weza kuleli khofi elibizwa nge- “Rabia Women's Coffee” futhi wabhala inoveli yakhe ethi “Aziyade” iphikisana neGolide Horn. Isifunda, lapho "umakhelwane waseTurkey" wokuqala wabuyiselwa futhi wagcinwa uphila namuhla, unezindawo ezisebenza njengezindawo zokuvakasha. Isifunda lesi sibizwa ngeNcwadi yokuHamba ka -Eriya Çelebi njenge "Idris M nyumba Promenade".
IPierre Loti, okuyindawo ethandwa yibo bonke abantu abavela kwamanye amazwe kanye nabahambi abeza e-Istanbul ngekhulu le-19, inezakhiwo eziningi zomlando ezizungezile. Enye yazo yiKaşgari Tekkesi yokhuni enemibhalo emibili, eyabhalwa ngo-1813. Futhi, ekungeneni kwesikhungo, isakhiwo esinetshe elimhlophe eliyindilinga elibhalwe ngesiPersian yi-Çolak Hasan Tekkesi. Isakhiwo esingokomlando emgqeni weTekke iSikole Sezokwelapha. Ithuna likaMevlevi ogama lakhe lingu- "İskender Dede", oshone ngo-1589, likhona phambi kweMekteb nangaphakathi kwendawo yesakhiwo, eyakhiwe ngu-İdris-i Bitlisi, ophinde abengumlobi wezomlando wase-Ottoman. Enye yemithombo emithathu ephambi kwe-İskender Dede yaziwa ngokuthi iDileki (noma inhloso) Kahle. Ku-Evliya Çelebi Seyahatname mayelana nalomthombo; Ubhala ukuthi "labo ababheka emthonjeni babona izifiso zabo emithonjeni yabo". Engxenyeni engenhla yaleli thuna kukhona amathuna kaSaray “Atçıbaşı (Mirahur-Tuğ General) Ali Ağa nomndeni wakhe. Ngaphezu kwalokho, i- "Sarnıç", okukholakala ukuthi yakhiwa ngesikhathi seByzantine futhi isetshenziswe esikhathini se-Ottoman, igcina ukuba khona kwayo maphakathi nesikhungo.
Ungayithola kanjani iPherre Loti Hill?
Uma uhamba nemoto yakho; Kunomgwaqo ongemuva wePierre Loti. Ngale ndlela, ungakhuphukela egqumeni futhi ushiye imoto yakho lapho, ushiye ipaki yemoto…
Labo abangena ngaphandle kwezimoto ezivela ku-Anatolian Side bangangena kalula kuma-Üsküdar - e-Eyüp. Ungakhuphuka egqumeni ngokuthatha ikhebula imoto esuka echwebeni lesikebhe.
Uma uza ngebhasi, udinga ukwehla e-Eyüp Sultan ukuma ukuze ufike kuPierre Loti uthathe imoto yentambo lapho.
Ungagibela ikhebula imoto uye ePherre Loti Hill nge-akbil ...
Imali yemoto ikhebula kaPierre Loti
Ukufika e-Pierre Loti Hill ngemoto ekhebula, uzothatha ikhebula imoto kaMasipala we-Istanbul Metropolitan. Ukuze uthole lokhu, ungadlula ngokufunda i-'Istanbul Card 'yakho njengohlobo olujwayelekile. Kukhishwe ngakunye, abanikazi bamakhadi ajwayelekile bakhokha u-2,60. Ngenkathi othisha bekhokha u-1,85, amanani amathikithi abafundi ayingu-1,25.
I-Pierre Loti Ikhebula Lezinqola Zezimoto Ngombono Oyingqayizivele
I-Olympos Teleferik iyancipha izivakashi zayo ngokubuka okubonakalayo (ividyo)
Pierre Loti kanye neCheth Car (Isithombe segalari - Ividiyo)
Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk System Car Cable
I-Eyüp - I-Pierre Loti - Ukuqokwa kwangaphambili kwe-Miniatürk Ropeway System Pro…
Ukwakhiwa kuqala e-Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk imoto yemoto
Imoto yekhebula phakathi kuka-Eyüp noPierre Loti izofika eMatatürk
I-Pierre Loti-Miniatürk idizayini yemoto yokuklanywa kwemoto yomsakazo imisiwe
I-Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk I-Cable Car Facility
Isimemezelo seTender: Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk System Car Car
Ubani uPierre Loti?
Istanbul Ingasuswa Kuloluhlu Lwezakhiwo Zomhlaba Ngenxa Ye-Haliç Metro Crossing Bridge
I-Ekrem İmamoğlu: 'Udaka lweGolide Phondo luzomiswa, Amanzi azohamba ephuma ku-3 Ahmet Fountain'
I-Historic Varda Bridge ibonakala
3. Ibhuloho ithande izivakashi ngombono wayo oyingqayizivele (iVidiyo)
Ukubuka kweLake ngo-Ephreli
Abantu base-Istanbul bajabulele imoto yekhebula ehambisana ne-Snow View
Kusuka kuMongameli weNhlangano Yezitimela Yezwe Lonke uJean Pierre Loubinoux oya kwi-TCDD Yüksek
Buka i-Bursa kusuka emotweni yekhebula